ဘဝမှတ်တိုင်: June 2015
မြန်မာFontများနဲ့Root apkကိုzipချုံ့၍တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။downloadလုပ်၍zipဖြည်ကာသုံးနိုင်ပါတယ်။ifont apkနဲ့ifontအသုံးပြု၍ချိန်းရသောမြန်မာfontများ/မြန်မာfont chainger(၅)မျိုး/Root.apk(၃)မျိုးကိုအောက်ကLinkမှာဝင်၍downloadလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Root အမျိုးမျိုး Myanmar font အမျိုးမျိုး myanmar keyboard. အမျိုးမျိုး apk
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/21/2015 11:46:00 pm0comments
IOS user တွေအတွက် ဖောင့်ဒီဇိုင်းပြောင်း သုံးနိုင်ရန် ဖောင့်ဒီဇိုင်းရှစ်မျိုးကို ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
မိမိတို့နှစ်သက် ရာဖောင့်ဒီဇိုင်းကို အောက်ကလင့်ကနေ download ရယူ လိုက်ပါ။
Zawgyi font -32bit-64bit For PC
Download ရယူနည်းကတော့ အရင်ကအတိုင်း safari ထဲကနေ link ကို add ပြီး install လုပ်ပေးယုံပါပဲ။အရင်သုံးထားတဲ့ zawgyi profile ကို setting =>> General =>> profile ထဲသွားပြီး အရင် ဖျက်ပေးလိုက်ပါ။ဖုန်းကို restart လေး အရင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်တော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဖောင့်ကို install လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ။
Credit >>> Original owner
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/21/2015 11:43:00 pm0comments
မြန်မာလက်ကွက်စုံလင်တဲ့ FrozenKyeboard ထပ်မံစုစည်းမူဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်းကီးဘုတ်ကိုတော့ အရောင်အမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စုစည်ထားပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့အတွက်အထူးအခွင့်ရေပေ့ါဗျာ။အသုံးပြုလိုသောဘော်ဒါတို့အတွက်အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုသာဒေါင်းပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/21/2015 11:40:00 pm0comments
Install Zawgyi Font And Keyboard
Font သွင်းရန် ၂ နည်း ရှိသည်။ Mi 3, Mi4တို့တွင် developer rom ဖြစ်ပါက theme ပြောင်းရုံဖြင့် ရသည်။ Mi Policy အသစ် အရ ၎င်းတို့၏ designer server ပေါ်တင်မထားသော Thrid Party Theme , Components များကို သွင်း ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Redmi 1s , Redmi Note တို့တွင် Root လုပ်ရသည်။
For Developer ROM
Developer ROM ကို အသုံးပြုထားလျှင် Font File ကို သွင်းနိုင်ပါသည်။ RoboZawgyi.Mtz ကို download ချပါ။
Phone ကို Computer နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ SD card သို့မဟုတ် Phone ထဲကို ထည့်ပါ။
Theme app ကို ဖွင့်ပါ။ Local Tab ကို သွားပါ။ Menu button ကို နှိပ်ပြီး Import from SD card ကို ရွေးပါ။
Download ချထားသော robozawgyi.mtz ကို ရွေးပေးပါ။
ပြီးလျှင် Category tab ကို သွားပါ။ Components > Font > Local အောက်က robozawgyi ကို ရွေးပါ။ Apply လုပ်ပါ။
iFont ကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း မြန်မာ font သွင်းနိုင်ပါသည်။ မြန်မာစာ တစ်ခု တည်းမြင်ရဖို့ အတွက် root မလုပ်ချင်ရင် iFont ဖြင့် ဦးစွာ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။
Player Store မှ ifont ကို ပထမ download ချပါ။
ပြီးလျှင် Zawgyi 20084.3 apkကို ဦးစွာ download ချပြီး သွင်းပါ။
iFont ကို ဖွင့်ပါ။ MY tab ကို သွားပါ။
Zawgyi2008 ကို တွေ့ပါမည်။ နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် Set လုပ်ပါ။
ပြီးလျှင် OK နှိပ်လိုက်ပါ။ Theme app တက်လာပါမည်။ မတက်လာပါက Theme ကို ဖွင့်ပါ။
ပြီးလျှင် Category tab ကို သွားပါ။ Components > Font > Local အောက်က Zawgyi2008(iFont) ကို ရွေးပါ။ Apply လုပ်ပါ။
အကယ်၍ iFont နည်းဖြင့် မြန်မာစာ မမြင်ရလျှင် Font ကို Default ပြန်ထားပြီး root လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာ keyboard နှင့် font သွင်းရင် Play Store မှ MM Aio Font Changer ကို Download ချပါ။
Aio Font changer ကို ဖွင့်ပါ။ Xiaomi ဖုန်းရဲ့ Andorid verison ပေါ်မူတည်ပြီး Tab ပေါ်က Android Version ကို ရွေးပေးပါ။ ယခု အချိန်တွင် Redmi , Redmi Note တို့သည် Android 4.2 ဖြစ်သည်။ Mi3, Mi4တို့ သည် android 4.4 ဖြစ်သည်။
Android 4.0 မှ 4.2 အတွက် Smart ဇော်ဂျီ ကို ရွေးပါ။ XML Method ကို နှိပ်ပါ။ Root permission မေးလျှင် Allow လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ဇော်ဂျီ မြင်ရပါမည်။
MIUI ကို Update လုပ်ပြီးလျှင် XML Method ဖြင့်လုပ်ထားလျှင် မြန်မာ font ပျောက်သွားပါမည်။
ပြန်လည် root လုပ်ပြီး XML Method ကို ပြန် သွင်းပေးဖို့လိုပါသည်။
Replace Roboto နည်းလမ်းကို မတိုက်တွန်း ပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော system font ကို အစားထိုးသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို နည်းသည် Root Explorer အသုံးပြုပြီး font အစားထိုး ခြင်း ဖြင့် အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။
Frozen Zawgyi Keyboard ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Keyboard သွင်းပြီးပါက Settings -> General settings -> Language & Input -> Keyboard & Input Methods တွင် Default ကို Frozen Zawgyi Keyboard Pro ကို ရွေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/21/2015 11:36:00 pm 1 comments
Keyboard Style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပါတဲ့ Bagan Keyboard (Activated)
အခုတလော Bagan Keyboard လေး ခတ်စားလာပါတယ်....
အခု Bagan Keyboard ကို Activated လုပ်ပြီးသားပါ Code တောင်းစရာမလိုပါ ....
Keyboard style 10 မျိုးနဲ့ Function များစွာ ပါဝင်ပါသေးတယ်.. အခု Bagan Keyboard ကို Samsung Show Room မှာ 1500 ပေးဝယ်ရပါတယ်.. ကျနော့ဆီမှာတော့ Free ပေါ့ဗျာ ... :)
Ref : Te Te TaTa Lay
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/21/2015 11:34:00 pm0comments
ကဲ ... ဒီတစ်ခါလည်း BaganKeyboard 4.4apk Codeနံပတ် ဖြည့်ပြီးသားလေးကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
ပုဂံ ကီးဘုတ် နှစ်မျိုးပါ စိမ်းပြာရောင်နဲ့ စိမ်းနီရောင်ပါ...မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ကီးဘုတ်ကို ဒေါင်းယူ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်....
အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အရင်ပုဂံကီးဘုတ်အား ဖျက်ပြီးမှ install ပြုလုပ်ပါ...
Credit : Chit yin htoo
Bagan စိမ်းပြာရောင် ဒေါင်းရန်
Bagan စိမ်းနီရောင် ဒေါင်းရန်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/18/2015 08:03:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/17/2015 09:33:00 pm0comments
♪ မမြင်စေချင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဖွက်ထားပေးမယ့် - Gallery Vault-Hide Video&Photo v2.3.2 Apk (14-June) ♫
လျှို့ဝှက်ချက်တွေများတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Gallery Vault-Hide Video&Photo PRO ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Gallery ထဲမှာရှိတဲ့ Photo တွေ Video တွေကို သူများတွေမမြင်နိုင်အောင် ဖွက်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ အချို့ဘော်ဒါတွေရှိတက် ပါတယ်။ 18+ Video တွေကို ဖုန်းထဲမှာ Save ထားတက်ကြတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း အခု Application နဲ့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကိုလည်း သူများတွေမမြင်စေချင်ရင် လည်း အခု Application လေးနဲ့ဖွက်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ သုံးနိုင်လည်းဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ Password အနေနဲ့ကတော့ Pattern Lock , Pin Lock အစရှိသဖြင့်မိမိသဘောကျသလိုထားနိုင်ပါတယ်။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
-- Vault:Support moving your encrypted files to SD card to save your device storage for All devices, include Android 4.4(KitKat), Android 5.0(Lollipop).
-- Vault:Be INVISIBLE except for you
-- Vault:Integrated with Private Web Browser and support downloading all images and videos in web page with just one tap.
-- Import your private PICTURES and Vault: from the phone gallery by Sharing in batches
-- Vault:Directly take and hide photos and videos in Gallery Vault
-- The Vault: media files are kept encrypted
-- Vault:The perfect media browser design, providing the smooth zoom and slide experience
-- Vault: recover files after the re-installation
-- Shake your phone to close Gallery Vault: inahurry
-- Vault:Support Break-in Alerts
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/17/2015 09:28:00 pm0comments
ဖုန်းထဲမှာ Music\_Mp3တွေ ဖိုင်လိုက် play လုပ်ပေးနိုင်မယ်-Folder Player Pro v3.9.2 Apk
Android ဖုန်း Tablet ကိုင်းဆောင်ထားသောဘော်ဒါတွေအတွက် Music တွေကို ဖိုင်လိုက် လမ်းညွှန်စာအုပ်အဖြစ်အသုံးပြုမယ် apk လေးတစ်ဖြစ်ပါတယ်။playlist အဖြစ်လည် ဘော်ဒါအတွက် Auto လုပ်ပေးပါတယ်။ Music တွေကို ဖိုင်းလိုက် အသုံးပြုမယ် ဘော်ဒါတို့ အဆင်ပြေပါတယ် ။ Google Play Store ဆိုရင် $ 3.56 ပေးရတယ်ဗျာ။ဝင်းလှိုင်ဆီမှာတော့ free ရတယ်ဗျာ။ ဘော်ဒါတို့အတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Android OS 4.0 အထက်မှာသုံးနိုင်ပြီး ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့626.6KB ဖြစ်ပါတယ်။မူနာကြည့်နိုင်အောင် Screen Shoot တွေကို အောက်မှာရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/17/2015 09:26:00 pm0comments
♪ Play Sotre ထည့်မရသူများအတွက် - Google Play Services v7.5.74 Apk (16-June) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Android Phone တွေမှာ Play Store ထည့်မရသူများနဲ့ Play Store Version အသစ်ထည့်သွင်းချင်သူများအတွက် Google Play Services v7.5.74 နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိမှာရှိပြီးသား Application & Game တွေကို Update ပြုလုပ် နိုင်ပြီး လိုချင်သော Application အသစ်များစွာကိုလည်း ရှာဖွေဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်သူ များအောက်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/17/2015 09:25:00 pm0comments
Android Version 2.xx မှ 5.xx အထိ မြန်မာစာ ထည့်ပေးနိုင်သည့် MPPG Font Tool v 1.9 (PC Version)
Android Version 2.xx မှ 5.xx အထိ မြန်မာစာကို အလွယ်တကူ ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ Tool ပါ..(PC အတွက်ပါ)
ဖုန်းက Root ဖေါက်ပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်..
Ref : ဘုတ်မဟာ လူ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/16/2015 11:05:00 pm0comments
ဖုန်းမှာပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ - Titanium Backup PRO ★ root v7.2.0.1 Apk
ဖုန်းမှာပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ - Titanium Backup PRO ★ root v7.2.0.1 Apk လေးပါ Backup Apk အကောင်းဆုံးလေးကိုအောက်မှာဒေါင်းလို့ရပါပြီ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
Titanium Backup PRO ★ root v7.2.0.1 Apk |3MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up
• This isabugfix release. Havealook at the changes in 7.2.0 too!
• Fixed problem when storing backups to built-in DocumentsProvider on some ASUS/Sony devices, which caused backups to appear as “data only”.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/16/2015 11:00:00 pm0comments
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့် Sim Card က lock ကျသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းပျောက်ပြီး unlock ပြန်လုပ်ဖို့ ဖုန်းက PUK Code တောင်းပါလိမ့်မယ် PUK ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာနဲ့တင် မပုတုရုံး ဆီရောက်
ရောက်သွားရတယ် တကယ်တော့ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက PUK code ကပါပြီးသားပါ (ပုံမှာပြထားသလို)
အဲ့ဒီ code ၈ လုံးကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ok နှိပ်ပါ
PIN number အသစ်ပြန်လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ 12345 လို့သာ ရိုက်ပြီး ok နှိပ်ပါ နောက်တစ်ခေါက် PIN number ကို confirm လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် 12345 လို့ထပ်ရိုက်ပေးပြီး ok နှိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုပြီးပါပြီ Sim Lock, ပြုတ်ပြီး ဖုန်းလိုင်းပြန်တတ်လာပါလိမ့်မယ်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/16/2015 10:43:00 pm0comments
♪ သင့်ရဲ့ Android Phone , Tablet တို့ကို Factory Reset ပြုလုပ်နည်း ♫
Android Device များကို စက်ရုံထုတ်အနေအထားအတိုင်းပြုလုပ်နိုိ်င်ဖို့အတွက် ‘ factory reset ‘ ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းလေးလံလာလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Android OS ဟာ ကောင်းကောင်းအလုပ် မလုပ်တော့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် factory reset ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့် Android Device ကို အခြားတစ်ယောက်ကို ရောင်းချ ဒါမှမဟုတ် လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင်တော့ factory သင့်ရဲ့ လုပ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက factory reset ပြုလုပ်လိုက်လို့ ပျက်သွားတဲ့ သင့်ရဲ့ ဒေတာတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမှာတော့ factory reset မလုပ်ခင် encrypt ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Andnroid Device ကို အခြားသူတစ်ယောက်ထံ လွှဲပြောင်းပေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒေတာများကို ပြန်ပြီး ရှာလို့မတွေ့အောင် ဖျက်ပစ်နည်းကို နောက်ပိုင်း မှာ ရေးပေးမှာပါ။ အခု tutorial မှာတော့ factory reset ပြုလုပ်နည်းကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Factory reset ပြုလုပ်ရင် သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်လို့ contacts, app & data , photos, videos နဲ့ အခြား အရေးကြီးဒေတာတွေကို အရင်ဆုံး backup ပြုလုပ်ပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ Apps များစွာ ရှိပြီး ယခင်တစ်ပတ်ထုတ် ဂျာနယ်မှာ ရေးသားပေးထားတဲ့ Helium က apps & data တွေကို sd card , cloud တို့မှာ backup လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Factory reset ပြုလုပ်ခြင်း
Phone settings ထဲသွားပြီး backup and reset ထဲဝင်ပါ။ Back up my data မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး backup account ကိုရွေးပေးပါ။ Automatic restore မှာလည်း အမှန်ခြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရင် သင့်ဖုန်းမှ app data, WiFi passwords နဲ့ အခြား ဆက်တင်တွေကို Google Servers များမှာ သိမ်းဆည်းပေးပြီး restore လုပ်ပေးမှာပါ။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ အခြား third-party apps များကို အသုံးပြုပြီးလည်း backup လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေကလည်း သူတို့ ကိုယ်ပိုင် backup ၀န်ဆောင်မှုများကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အတွက် backup and reset ကဏ္ဍအောက်မှာ ရွေးချယ်စရာ Option တစ်ခု အပိုရှိတတ်ပါ တယ်။ နှစ်သက်ရာ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ များကို အသုံးပြုပြီး backup လုပ်ပါ။
Factory reset လုပ်ဖို့အတွက် factory data reset , reset phone စတဲ့ ခလုတ်တွေကို နှိပ်ရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ sd card ထည့်သွင်းထားရင် sd card မှ ဒေတာတွေကို ဖျက်ပစ်မလားလို့ မေးမှာပါ။ သင့်ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Reset ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် reboot ဖြစ်ပြီး recovery mode ထဲရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ android device မှ ဒေတာများကို ဖျက်ပစ်မှာပါ။
ပြီးရင်တော့ reboot ဖြစ်သွားပြီး သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ စက်ရုံထုတ်အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးမှ factory reset ပြုလုပ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ ခိုးယူခံရရင် ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားရင် ဖုန်းထဲမှ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖိုင်တွေဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ Google ရဲ့ Android Device Manager ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အဝေးမှ factory reset ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Google က android device တွေမှာ android device manager ကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းပေးထားသလို ဖုန်းအဟောင်းတွေမှာလည်း အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကနေ တစ်ဆင့် နောက်ကွယ်ကနေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ android device manager မရှိရင် ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမပျောက်ခင်မှာ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဖုန်းပျောက်သွားရင် အခြားဖုန်းတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ပီစီကနေ Android Device Manager ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ သင့်ဖုန်းမှ Google အကောင့်နဲ့ login ၀င်ပါ။ Android Device Manager က သင့်ဖုန်းကို ရှာတွေ့ရင် ring, lock, erase စတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Erase ကို နှိပ်ရင် confirmation menu တစ်ခုပေါ်လာမှာပါ။ Confirm လုပ်လိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှ ဒေတာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး စက်ရုံထုတ် အခြေအနေအတိုင်း ရောက်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/16/2015 10:41:00 pm0comments
Android ဖုန်းနှင့် Tablet တွေမှာအသုံးများတဲ့ Viber Version သစ်-Viber 5.4.1.365 for Android
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/16/2015 10:38:00 pm0comments